Talaado, Luulyo, 20, 2021 (Wararka-Maanta) – Iyadoo maanta dunida muslimka ah laga xusayo ciidda ciidul adxaha ayaa maanta waxaa si wayn looga ciiday magaalada Jigjiga ee Caasimadda degaanka Soomaalida.Haddaba garoonka kubadda cagta ee Jigjiga ayaa saaka xilli hore dadku isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee Jigjiga, si ay u tukadaan labada rakcadood ee Ciidda.
Madaxwaynaha degaanka Mustafe cagjar iyo masuuliyiinta xukuumadiisa ayaa dhankooda shacabka kala qayb qaatay munaasabaddii ciidda, iyadoo madaxwaynuhu uu halkaa ugu hambalyeeyay shacabka muslimiinta munaasabadda ciidda.
Wararka Maanta : Muxuu yahay heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray Garoowe? - Caasima...
Dhinaca kale shacabka dhankooda waxaa ka muuqatay farxadda ciidda, iyadoo dadku ay isugu hambalyaynayeen munaasabaddii Ciidda.
Ciidda ayaa kusoo hagaagtay xilli degaanka Soomaalida uu ka jiro sicir bar dhan walba ah, taasina ay keentay inaysan dadku sidii la rabay aysan u ciidin maciishada iyo noloshii kale oo kacday awgeed.
Gobolada iyo degmooyinka degaanka ayaa iyaguna si wayn looga ciiday maanta.
Amiirka Al-shabaab oo war kasoo saaray arrimaha doorashooyinka dalka…
Khilaaf saameyn xun yeeshay oo ka dhex-taagan talisyada ciidanka xoogg…
Wararka Maanta : Shil baabuur oo ka dhacay in u dhaxaysa Hargaysa iyo Berbera oo sababay...
Wararka Maanta : Daawo: Xamza oo shaaciyey arrimo yaab leh oo uu ugu tegay wasaaraddii ...
Wararka Maanta : Foreign Policy: Mareykanka ayaa diidan in Somaliland ay aqoonsi hesho ...
Wararka Maanta : Wararkii ugu Danbeeyey Maraykanka oo 22 Diyaaradood oo Dagaal ah udiray ...
Wararka Maanta : Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo si kulul uga hadlay...
Wararka Maanta : Raysal wasaaraha Soomaaliya oo goordhaw gaaray magaalada Kismaayo
Wararka Somali17 mins ago